ခင်လေးငယ် : September 2012
“ဒီတံခါးကို ဘာလို့ မဖွင့်တာလဲ..? လေကောင်းလေသန့် ရနိုင်တယ် မဟုတ်လား..?? ”
ကျွန်မ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က တံခါးတစ်ပေါက် ထံ လက်ညှိုးညွှန်ကာ မေးခွန်း ထုတ်သည်။ ကျွန်မ အဖြေကို မည်သည့်အခါမှ ရတတ်လေ့ မရှိသော်လည်း ထိုသို့သော မေးခွန်းမျိုးနှင့် အလားတူ မေးခွန်းများစွာကို သူမ မေးမြန်းတတ်လေ့ ရှိသည်မှာ နှစ်ချီခဲ့ပြီ..။ ကျွန်မက လည်း ထုံးစံအတိုင်း သူမ လက်ညှိုးညွှန်ရာကို လိုက်လံကြည့်ကာ ခပ်ဆိတ်ဆိတ်နှင့် ပြုံးပြလေ့ရှိ၏။
မကြာသေးခင် လပိုင်းလေးက သူမမေးခဲ့သော မေးခွန်းဟောင်း တစ်ခုကို ကျွန်မ ပြန်သတိရ လာမိသည်..။ ထပ်တူကျသော မေးခွန်းပင်ဖြစ်၏။ ဖွင့်ခြင်း- ပိတ်ခြင်း- အဖြစ်သည်သာ ကွဲလွဲခဲ့၏..။ ထိုစဉ်က သူမ လက်ညှိုး ညွှန်ခဲ့ရာသည် ကျွန်မ အိမ်ထမင်းစားခန်း စားပွဲဘေးမှ ပြတင်းပေါက် ကျယ်ပင်..။
“ကိုယ် မင်းအိမ်လာချိန်တိုင်း ရာသီမရွေး ဒီပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်ထားတာပဲ တွေ့ရတယ်နော် ~ ဘာလို့ မပိတ်တာလဲ..!! မှန်တွေက ကြည်နေတာပဲကို.. လိုက်ကာဖြူတွေကို ဆွဲဖွင့်ထားယုံနဲ့ ဒီမြင်ကွင်းကိုပဲ အတိုင်းသား ကြည့်လို့ ရတယ် မဟုတ်လား..? ”
ပြတင်းပေါက်ကို တစ်လှည့် သူမ မျက်နှာလေးကို တစ်လှည့် ငေးမောရင်း ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်မ နှုတ်ဆိတ်ကာ ပြုံးနေခဲ့ ပါသည်။ ထူးဆန်းသည်မှာ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းသည် မေးခွန်းတိုင်းကို ထိုအကြိမ်များတွင် တစ်ခါမျှသာ မေးတတ်လေ့ရှိ၏။ ကျွန်မ အဖြေကို မရမချင်း ထပ်ကာ တလည်းလည်း သူမ မမေးတတ်ပေ။ သူမသည် မေးခွန်းများသာ မေး၍ ကျွန်မ၏ နှုတ်ဆိတ်နေမှုနှင့် ကျွန်မ၏ အပြုံးများကို ကျင့်သားရနေ သူမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်မ၏ နှုတ်ဆိတ်မှုမှာ အဖြေတစ်ခု ရှိနေခဲ့ပြီ။ နှုတ်ခမ်းဖြားမှ အပြုံးနှင့် အတူလည်း အဖြေရှိနေခဲ့ ပါ၏။ ဘာ့ကြောင့် တံခါးပေါက်တွေကို ဖွင့်ရ ပိတ်ရပါသလဲ ဟူသည့် အမေးမျိုးကို သူမအား ကျွန်မ ရှင်းပြ ဖြေကြားရန် မလိုအပ်လှ..။ အကယ်၍ စကားလုံးများအဖြစ် ကျွန်မ သူ့ကို ဖြေပြခဲ့သည် ရှိသော်ငြား သူမ သေချာစွာ နားလည်နိုင် လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ..။ သူမ မြင်နိုင်သော မြင်ကွင်း၌ ရှိသော တံခါးများကိုသာ သူမ သိနေ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မတွင် ကျွန်မ၏ သူငယ်ချင်း မသိသော တံခါးများစွာ ရှိနေပါသည်။ ကျွန်မ ထပ်ပြောလိုပါသည်။ ထိုတံခါး အားလုံးတို့သည် သူမ မြင်နိုင်သော မြင်ကွင်းထဲတွင် ရှိမနေပါ။ သူမနည်းတူ ကျွန်မ၏ တံခါးများကို မည်သူမှ မြင်နိုင်မည် မဟုတ်။ တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်မ၏ တံခါးများကို ကျွန်မကိုယ်တိုင် တွန်းဖွင့် မထားသလို သော့ခတ်၍လည်း ပိတ်မထားပါ..။ ကျွန်မ၏ တံခါးတိုင်းသည် သူ့အလို သူ့ သဘာဝ အတိုင်းသာ လွတ်လပ်လှပ သေသပ်စွာ ရှိနေပါလိမ့်မည်။
မည်သူ့ကို မည်သည့် အကြောင်းပြချက်များနှင့် ဘယ်သောအခါမှ ကျွန်မ ဖြေကြား ဖြစ်တော့မည် မဟုတ်။
တွန်းဖွင့်ရန် မလိုအပ်သော ~
ဆွဲစေ့ရန် မလိုအပ်သော ~
သော့နှင့်ခတ် ပိတ်ချလိုက်ရန် မလိုအပ်သော ~
ကျွန်မ၏ တံခါးများကို ကျွန်မ ချစ်မြတ်နိုးသည်။ ပိတ်ထားသော်ငြား ကျွန်မ၏ ရှုရှိုက်ခြင်း အတွက် လုံလောက်စွာ လေဝင်လေထွက် ကောင်းနေ ပါလိမ့်မည်။ ထို့အတူ ဖွင့်ထားပါလျှင်လည်း စိတ်အနှောက်ယှက် ဖြစ်စရာ တစုံတရာမျှ ကျွန်မတွင် ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
ပိတ်ခြင်း- ဖွင့်ခြင်းတို့၏ အလွန် ~ ဟိုမှာဘက်ဆီ၌ တသီးတစ်သန့် ရှိ နေပါသော... ကျွန်မ၏ ထို တံခါးများ အကြောင်းကို မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ နားလည်မည် မဟုတ်သော်လည်း ကျွန်မ ကျေနပ်ပါသည်။
(ခင်လေးငယ်) 2012, March, 29 - 7:25pm
Posted by Khin Lay Ngel at 9/09/2012 11:33:00 PM No comments: